Epreli 2020-Funda ukuRhweba
ILibra 2.0: Ingcono kunePivot, Ibanga iLungu loMbutho weLibra
Ukuhlaziywa: 30 April 2020
Ukuqhubela phambili unyaka emva kokupapashwa kokuqala kweLibra Whitepaper, kule nyanga iprojekthi yemali yedijithali ye-Facebook yenze uhlaziyo olukhulu lokwazisa iLibra 2.0 kwinjongo yokuxolisa abalawuli kunye nokuqhubela phambili iprojekthi.
ILibra iqale njengeprojekthi enezinto ezijolise ekuxhamleni abantu abangaphezulu kweebhiliyoni ezimbini kwihlabathi liphela ngonxibelelwano phakathi kukaFacebook noWhatsapp, i-Instagram kunye nendawo yayo ephambili yemidiya yoluntu. Kususela oko kucetywayo, ngokusebenzisa iimali zedijithali, ukufikelela kwindawo engafakwanga zibanki kwaye ekugqibeleni kutshintshe indlela ihlabathi elisebenzisa ngayo imali.
Oku, nangona kunjalo, kukonyuse ukukrokrela ngaphezulu kwabalawuli abaliqela kwihlabathi liphela, njenge-US ngelixa i-Senate irhuqa iLibra ngaphezulu kwamalahle ngokubhekisele kwimibuzo malunga nenkampani yabucala eyenza iiasethi zayo kunye neenkxalabo zokhuselo indawo yeendaba zentlalo ehlala ithintela .
Okwangoku, utshintsho lwamva nje kwiphepha elimhlophe, okanye ukupheliswa kweenjongo eziphambili kufuneka, ke, zibone iprojekthi yeLibra ibhetele kakhulu ngokuvumelanisa nabalawuli, kodwa mhlawumbi ingaphumeleli. Nangona kunjalo, elinye lamalungu oMbutho weLibra- iBison Trails -luthatha olu tshintsho aluhambanga kangako njengokujika kodwa endaweni yokuqhubela phambili.
Ukuphumeza iiNjongo zayo zoCwangciso
Nangona iLibra isenokungabonakali ngathi inethemba xa iqala ukuseta, ukuphuculwa okwangoku kungongeza enye inqanaba ekumiselweni- njengoko oko kunokuba nefuthe elikhulu kunokuba kungazange kube nethuba lokuya esidlangalaleni.
Enye into enomdla kakhulu malunga nokufumana injongo yokwamkelwa ngobuninzi kukufumana iprojekthi emnyango kunye nasezandleni zabantu abayifunayo. Siye sondela kufutshane nenjongo ngeendaba ezisandula ukubikwa, utshilo u-CEO. Inxalenye edlalwe yiBison Trail ihlala izinzile. Sigxile kwitekhnoloji kwaye sinceda ukuphucula, ukugcina, ukumilisela nokukhusela kwinqanaba lehlabathi inethiwekhi ye-blockchain.
tags Cryptocurrency, ILibra kaFacebook, Libra 2.0, Umbutho weLibra, Umqondiso weLibra
ILibra 2.0: Ingcono kune-pivot, ibanga elilungu loMbutho weLibra
tags AU200AUD, Uhlalutyo lwamaxabiso
Izilayidi ze-AUDUSD phantsi kwenqanaba le-0.6500 njengeNgcono yoMngcipheko weTone kwiAussie
Uhlalutyo lwamaxabiso e-AUDUSD-Epreli 30
Isibini se-AUDUSD siwele phantsi kwenqanaba eliphambili le-0.6500 yengqondo ukuya kwinqanaba elitsha lemihla ngemihla, nangona kunjalo, lakhawuleza lafumana iipip ezimbalwa kamva. Oku kudityaniswe netoni ekhaphukhaphu kwiimarike ze-equity ubukhulu becala kubangele ukuba indawo ekhuselekileyo ibe yindawo ekhuselekileyo ngokuchasene nemali ekucingelwa ukuba inokuba yingozi- idola yase-Australia-kwaye ke kwabelwana ngayo kwi-intraday yezihlangu ezingama-80.
Amanqanaba okumelana: 0.7031, 0.6878, 0.6612
Amanqanaba enkxaso: 0.6434, 0.5959, 0.5506
Akukho mqondiso ubonakalayo wokutshintsha kwezinto ngokwendlela ebanzi okwangoku. Ukuhla komgangatho omkhulu ukusuka kwinqanaba le-1.1079 (ephezulu) nangona kunjalo kuxhasa ulwandiso. Uqikelelo lwe-1.1079 ukuya kwi-0.6878 ukusuka kwi-0.8135 ukuya kwi-0.5506 yamanqanaba sele efikile kwiipesenti ezingama-61.8.
Apho ikhefu eliqhubekayo livula indlela eya kwinqanaba le-0.4773 (ephantsi) kwinqanaba. Ngapha koko, ngokuchaseneyo, ikhefu eliqhubekayo le-0.6612 yenqanaba linokuthetha ukufakwa kwinqanaba eliphakathi ukuya kwixesha elide kunye nokutshintsha kugxininiso kwinqanaba elilandelayo lokumelana ne-0.7031.
Ukuphakama okuphezulu ngokubuyela umva namhlanje kunokusekwa kwi-AUDUSD kwinqanaba le-0.6569. Ukuphakama kwangaphakathi kusebusuku kubonwa njengokunyuka. Olunye ulonyuso lunokuqwalaselwa ngokukhawuleza njengoko inkxaso etshintshe inqanaba lokumelana ne-0.6434 ihlala ihleli. Uguquko lunokwanda ukusuka kwi-0.5506 ukuya kwi-0.6684 yamanqanaba oxhathiso lwesitshixo ngaphaya kwenqanaba le-0.6569.
Ukophula okuqhubekayo kwenqanaba le-0.6434 kwicala elisezantsi kunokuthetha ukuphakama kwexesha elifutshane kukwahluka kwe-bearish kwi-4 yeyure ye-RSI. Ngaphaya koko, i-intraday bias inokutshintshelwa umva kwicala eliphantsi lenqanaba lenkxaso le-0.6265.
I-AUD / JPY ikwi-Uptrend, Ukuchasana nobuso kwiNqanaba 70.000
Amanqanaba okuGxila aphambili: 74.000, 76.000, 78.000
Amanqanaba enkxaso aphambili: 58.000, 60.000, 62.000
Ixabiso le-AUD / JPY yexesha elide iTrend: Bullish
Ngo-Epreli, isibini se-AUD / JPY sasikwimarike yenkomo. Ngo-Matshi, intengiso yehle kwinqanaba 61.679. Esi sibini saphinda saqala ukuya phezulu. Ekuhambeni kwayo kokuqala, amaxabiso axhathisiwe ziintsuku ezingama-21 ze-SMA kwinqanaba lama-66.642. Emva kokubuyela umva, iinkunzi zeenkomo zaphinda zenyuka zenyuka ziye kuphula ii-SMA zeentsuku ezingama-21. Ukunyuka kufikelele kwelinye inqanaba eliphezulu le-69.262 kwaye kwaxhathiswa yi-50-day SMA. Ixabiso labuya umva kwaye kamva laphula i-SMA yeentsuku ezingama-50.
I-AUD / JPY-Itshathi yemihla ngemihla
Imakethi inyuke yaya kwinqanaba lama-62 leNdawo yamaQiniso aMandla aHlukeneyo ixesha eli-14. Ixabiso likwindawo ephezulu kunye nangaphezulu komgangatho osembindini wama-50.
I-AUD / JPY Umndilili wexesha eliphakathi: Bullish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isibini sikwisiteshi esinyukayo. Imakethi okwangoku ingaphezulu kwenqanaba lama-69.000. Esi sibini sithengisa ngoku kwinqanaba le-69.945. Ukunyuka okuphezulu kuyachaswa kwinqanaba le-69.945. Ikhandlela leenkomo livavanya okwangoku ukophula inqanaba lokumelana.
I-AUD / JPY-4 Itshathi yeYure
I-Yen okwangoku ingaphantsi kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Oku kuthetha ukuba intengiso ikwi-bearish umfutho. Oku kuyaphikisana nesenzo sexabiso esibonisa imiqondiso ye-bullish. Ii-SMAs zijongela phezulu zibonisa uptrend.
Imbonakalo ngokubanzi ye-AUD / JPY
Iimarike zikwenyuka kodwa zijongana nokuchasana kwinqanaba 69.945. Ixesha lamaXabiso aMandla aHlanganisiweyo ixesha le-14 libonisa ukunyuka okuphezulu kwengqekembe. Kwisakhelo sexesha elisezantsi, imakethi yenza uthotho lweendawo eziphakamileyo kunye nokunyuka okuphezulu.
tags AUDJPY, Uhlalutyo lwamaxabiso
I-USDCHF ihleli phakathi koRhwebo oluQinisekileyo lweSuku lwe-5 kwiRow
Uhlalutyo lwamaxabiso e-USDCHF-Epreli 30
Ukutshintshiselana nge-USDCHF ngexesha lokushicilela kufutshane nenqanaba le-0.9735, kubonisa ukonyuka kwemihla ngemihla ngepesenti eyi-0.15. Nangona isibini sijika siluhlaza, basabambekile ngaphakathi kwinqanaba lokurhweba lenqanaba le-0.9700-0.9800. Ngenxa yoko, amaxabiso kwiseshoni yokungabikho atsibe ukutyhala kakhulu ngaphaya koluhlu lwentengiso yosuku olungaphambili.
Amanqanaba okumelana: 1.0231, 1.0027, 0.9845
Isibini se-USDCHF siye sahla saya kwiseshoni yokuqala yaseYurophu kwaye ngoku sihlala kufutshane emazantsi erhwebo lwarhoqo ngeveki, kwinqanaba le-0.9724. NgoLwesihlanu, esi sibini sadibana nonikezelo oluzinzileyo kwaye saqhubeka nokuguqula isilayidi sosuku lwangaphambili ukusuka kwinqanaba le-0.9766 okanye umndilili obaluleke kakhulu wokuhamba kwemihla ngemihla we-5 kulandela iibhere ezibuyiselweyo ngaphezulu kwedola yaseMelika.
Ukuvalwa okungaphaya kwenqanaba le-0.9800 kunokubonisa ukwehla kwoluhlu kwaye uvule umnyango wokubuyisela ubuncinci beepips ze-100. Kwelinye icala, ukudlula kwisiphelo esisezantsi soluhlu kwinqanaba le-0.9700 kunokuthetha ukumisa imeko ephezulu ukusuka kwinqanaba eliphantsi le-0.9500 ngo-Matshi 30 kunye nokulungelelanisa umngcipheko ngokuhla ukuya kwinqanaba le-0.9600 (ezantsi ngo-Epreli 15).
Itshathi yeeyure ezi-4 iphakamisa ukuba i-USDCHF idibanisa kumanqanaba e-0.9700 kunye ne-0.9800 ukusukela ngaphaya kokunyuka komgangatho wokunyuka ukusuka kwinqanaba eliphantsi le-0.9600 kunye nokuthengisa ngaphaya. Nangona kunjalo, umnqamlezo wokuhamba okuphakathi kwe-5 kunye ne-13 kuthetha ukuba kunokwenzeka ukuba kususwe isitshixo esinokuzisa isibini ezantsi kwinqanaba le-0.9700 (nge-Epreli ephantsi ye-27) nangaphantsi kwayo, inqanaba le-0.9650 (ephantsi ngo-Epreli 22) kunye nenqanaba le-0.9600 (ephantsi ngo-Epreli 14) .
Kwicala elingaphezulu, uxhathiso lokuqala luhleli kwinqanaba le-0.9800 kunye nenqanaba le-0.9902 (phezulu ngoMatshi 24) de kube kufikelela kwinqanaba eliphezulu kwinqanaba le-1.0027 ngasekupheleni kwe-2019. Kwicala elisezantsi, indawo ephezulu inokuqhubeka nokophula kwinqanaba le-0.9700 elincinci lenkxaso. Ukuthamba kwangaphakathi kwinqanaba le-0.9600 lenkxaso kwinqanaba elilandelayo ukuya kutshintsho.
I-Bitcoin Cash (BCH) ebuyayo, iinzame zokophula i-280 yeedola
Amanqanaba enkxaso aphambili: $ 200, i-$ 160, i-$ 120
I-BCH / iXabiso leXabiso leXesha elide leNqanaba: Bullish
Izolo, i-BCH iphinde yabuya kwaye yaphula i-250 yeedola kodwa yahluleka ukophula i-280 yeedola. Iimarike zafikelela kuma-275 eedola kwaye zagqithisa. Abathengisi bavele kwaye bazama ukurhuqela ixabiso ezantsi.
Iinkunzi zikhuphisana nenqanaba lamaxabiso leenkomo ngoku. Iibhere zonyusa ukunganyaniseki kwindawo yokumelana ne- $ 280. Icala elisezantsi, ukuba iinkunzi zeenkomo zijikile kuxhathiso lwangoku, i-crypto izakuwela kwi-250 yeedola ezisezantsi. Kwicala elingaphezulu, ukuba iinkunzi zeenkomo zoyise ukunganyangeki kwe- $ 280, i-BCH iya kunyuka iye kuthi ga kwixabiso lama- $ 350.
Ii-SMAs zine-crossover ye-bullish njengeentsuku ezingama-21 ze-SMA ezinqumlayo ngaphezulu kwe-50-day SMA. I-BCH iphinde inyuke yaya kwinqanaba lama-64 le-Index ye-Relative Strength period 14. Oku kubonisa ukuba intengiso ikummandla wonyuselo. I-BCH inokwenzeka ukuba inyuke.
I-BCH / USD Umndilili wexesha eliphakathi: Bullish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, i-BCH ikwi-uptrend. Iinkunzi ziye zaphula i-250 yeedola kwaye zazama ukwaphula i-275 kunye ne-280 yokuxhathisa. Ikhefu elingaphezulu kwe- $ 280 yokuxhathisa iya kuthatha i-BCH kwindawo ye-downtrend kwaye iqale ukuqala kwakhona kwe-uptrend.
Itshati yeYure eyi-BCH / USD 4
Imali ye-Bitcoin ingaphezulu kwe-80% yoluhlu lwe-stochastic yemihla ngemihla. Oku kubonisa ukuba imarike ifikelele kwingingqi ethengiweyo. Abathengisi banokuvela kodwa imeko yangoku egqithisileyo ayinakubamba. Ii-SMAs zitshibilika zijonge phezulu.
I-Bitcoin Cash ikwindawo ephezulu. Iinkunzi zenkomo ngoku zizama ukwaphula i-280 yeedola. Ngokwesalathiso se-stochastic, i-BCH ikummandla othengwe ngaphezulu kodwa ayinakubamba njengoko imeko iqhubeka nokunyuka kwayo. Ngexesha lokubhalwa, iinkunzi zeenkomo zizama ukwaphula ukunganyangeki okuncinci kwi- $ 275.
UKUQHUBEKA: Amaxabiso eBitcoin aqhubela phambili nge-15% yokunyuka ukuya kwi-9,000 yeedola, nasi isizathu
Amaxabiso eBitcoin ebeqhubeka nophahla kutsha nje, enyuka ngakumbi malunga neepesenti ezili-15 malunga neeyure ezingama-24 kwaye ubeka eyona mali idumileyo yidijithali kwinqanaba le-9,000 leedola.
Kule nqanaba, njengoko kubonwe kwiCoinmarketcap, i-asethi yedijithali ibethe kwelona nqanaba liphezulu ukusukela ekuqaleni kuka-Matshi kwaye inyuke ngaphezulu kweepesenti ze-15 ngaphezulu kweeyure ezingama-24. Ngelixa bechaza oku kuziphatha kwexabiso lakutshanje, abanye abahlalutyi babhekisa kwimetric zobuchwephesha kunye nemibono ejikeleze isiqingatha esilindelweyo, esinokuthi sinciphise ukubonelelwa kwe-bitcoin yangoku ngama-50%.
Kule micimbi, uDenis Vinokourov, intloko yophando yeBequant, inkampani esempahla esekwe eLondon esekwe kwi-asethi, ulinganisile.
"Imakethi yanconyelwa ukuphuma, kungaphantsi kweeveki ezimbini phambi komvuzo ekulindelwe ukuba uzuze isiqingatha," utshilo.
"Ikhosi yayihlala ingacacanga kwaye, ngobuninzi bezinto zentengiso kwimarike yeziphumo eziza kuthetha ukuba abarhwebi kunye nabatyali mali bafuna ukhuseleko olungezantsi, xa kuthelekiswa nomngcipheko ophezulu, bekusoloko kukho ithemba lokuphinda kubuyiswe," utshilo uVinokourov. Ukanti kweli nqanaba, utshilo, imeko ijongeka icacile.
Umdlandla weBullish Dominates Trend
U-Joe DiPasquale, u-CEO we-crypto hedge fund manager we-BitBull Capital, ubonelele ngakumbi ngalo mba, egxininisa ukuba ixabiso lika-Bitcoin "livavanye i-avareji yeentsuku eziyi-150 ezihamba kule veki iphelileyo kwaye ekugqibeleni yagqobhoza namhlanje, isoyikisa ukuxhathisa nge- $ 8,200." Ukuphuma phambili, ukuchasana okulandelayo kuhlala malunga ne- $ 8,700 kunye ne-9,000 yeedola, "watsho, wongeza ukuba" iBitcoin kungenzeka ukuba izinze.
Iimakethi zinamava 'abalulekileyo' ukusukela oko iBitcoin iphindaphindekile, ivela kumthambeka wokuhla okwenzekileyo kula maxesha akutshanje, utshilo umququzeleli wenkampani yolawulo lweeasethi yedijithali kunye negosa eliyintloko lentengiso, uMichael Collett.
Ukucinga ukuba iibhere ziyakuthintela ukumelana nokuchasana nemikhwa yangoku kwaye bazinyanzele ukuba babambe izikhundla ixesha elide, kufanelekile ukuba silindele ukubona amanyathelo ezentengiso ngokuthe tye njengoko uchulumanco lwesahlulo lusenza iinkunzi ezizisebenzisayo njenge Ithuba lokuthenga i-BTC kumanqanaba amaxabiso aphantsi kude kube emva kokuhla kwesiqingatha sexabiso, ”utshilo.
tags Bitcoin (BTC), I-Bitcoin Halving, Ixabiso leBBT
Ukurhweba nge-GBPUSD phantsi kwamanqanaba e-1.2500 phakathi kwexhala leBrexit
Ukuhlaziywa: 29 April 2020
Uhlalutyo lwamaxabiso e-GBPUSD-Epreli 29
I-GBPUSD yajijisana ukuphucula ukubuyela kwayo okokuqala kwaye yaqhubeka ibuyisa umva kufutshane neempawu eziphambili zengqondo ze-1.2500. Isibini se-GBPUSD siphinde safumana ukwehla ukusuka kumanqanaba e-swing yemihla ngemihla ukuya kumanqanaba aphantsi kwe-1.2400 kwaye ekugqibeleni safumana malunga neepips ezingama-25. Ukusukela ukuba uNobhala Wezangaphandle wase-UK uDominic Raab uqinisekisile ukuba inkqubo ye-Brexit izakuphela ekupheleni kwalo nyaka, i-selloff yathatha isantya.
Amanqanaba okumelana: 1.3514, 1.3050, 1.2647
Amanqanaba enkxaso: 1.2350, 1.1958, 1.1409
I-GBPUSD yexesha elide iTrend: Ukutshintsha
I-GBPUSD ibambe kuluhlu lwe-1.2163 / 2647 yamanqanaba kwaye ibambe ngokuqinileyo kukhetho lwangaphakathi. Logama inqanaba lenkxaso le-1.2163 libambe, ukonyuka okungaphezulu kunokuqhubeka nokuthandeka. Ukuqhekeka kwamanqanaba e-1.2500 kwicala elingaphezulu kunokunyusa ukubuyiswa ukusuka kwi-1.1409 ukuya kwi-1.3200 yokuxhathisa.
Ngokuchasene noko, ukuwa kwamanqanaba e-1.2163 kungacebisa ukugqitywa kokujika ukusuka kumanqanaba e-1.1409, kwaye i-Intraday bias inokubuyiselwa umva kwinqanaba eliphantsi le-1.1409.
I-GBPUSD yeXesha elifutshane lokuHamba: Bullish
Ukutsalwa kwitshathi yeeyure ezi-4 kuhlala kuthe tye, kwaye isibini semali sihamba ngaphaya komgaqo wokunyuka. Isalathiso saMandla esiNxulumene siBambe umgama ophucukileyo ngaphezulu kwenqanaba lama-50 kwaye ke sihlala sikude kumanqanaba entengo angaphezulu.
Ukuchaswa kulindelwe kwinqanaba le-1.2520, kwaye lelo liphezulu ngeveki kwaye kwinqanaba elinciphise i-GBPUSD phakathi ku-Epreli. Oku kukhokelwa kwinqanaba elikwi-1.2647, lona ngokwalo kukuphakama okuphezulu. Inkxaso iboniswa kwinqanaba le-1.2350, ekwakukade ilinganisela i-GBPUSD, elandelwa ngumgca ongezantsi othe tyaba kwinqanaba le-1.2247, elinye elinike inkxaso kule mihla yokugqibela.
tags GBPUSD, Uhlalutyo Technical
Ixabiso leGolide: Ukujongwa komngcipheko kwi-Mood Ukulinganisa kumaxabiso eXAUUSD kwinqanaba le- $ 1,700 kwiBhidi yokuHlala
Uhlalutyo lwamaxabiso eXAUUSD-Epreli 29
Ngexesha leseshoni yaseYurophu esekupheleni, iGolide yaya kungena kwiseshoni yaseMelika kwaye yahlaziya imihla ngemihla njengeyona nto iphambili emngciphekweni wobunzima kwiXAUUSD, kodwa ikwazile ukuhlala ngaphezulu nje kwenani elijikeleze i- $ 1,703.00. Oku kuvela phakathi kokutshintsha okukhulu kumaxabiso eoyile ekrwada, ethe yaqinisa ithemba kubatyalomali kwaye yachitha indawo ekhuselekileyo yesinyithi esixabisekileyo.
Amanqanaba okumelana nawo: $ 1,780, $ 1,765, $ 1,747
Amanqanaba enkxaso: $ 1,690, $ 1,663, $ 1,623
I-XAUUSD yexesha elide iTrend: Bullish
Igolide igcinwe ishukuma ngokuthe tye ukusukela ekuqaleni kuka-Epreli. Oku kuyarhweba ngaphaya kweendawo ezikufuphi ngoFebruwari-Matshi. Kodwa, oku kujongeka njengokudityaniswa kwexesha eliphakathi ukuya kwixesha elide. Nangona ixabiso libetha ngaphantsi kwenqanaba le- $ 1,703.00, sinokubona uxinzelelo ngakumbi lokuthengisa.
Ukunyuka kungabuya kwangoko xa isibini sibhabha ngaphaya kwenqanaba lokumelana ne- $ 1,719.25, elandelwa kukunyuka kwinqanaba lokumelana ne- $ 1,738.87, kwaye ukuba inyuka ngaphezulu kwelo nqanaba, sinokuqikelela ukuba isibini siza kubetha inqanaba lokumelana ne- $ 1,747.72.
I-XAUUSD yeXesha elifutshane eliQhelekileyo: Bullish
I-XAUUSD idibanisa inkqubela phambili eqale phakathi ku-Matshi njengoko isinyithi sibambe ngaphaya kwendlela enyukayo kwitshathi yeeyure ezine. I-XAUUSD igcina umfutho oqinileyo njengoko abathengi ngoku befuna ikhefu elingaphaya kwenqanaba le- $ 1747.00 kwimihlaba yokuphuma yemihla ngemihla enokuvula iingcango ukuya kwinqanaba lokumelana ne- $ 1,780.
Ngenye indlela, inkxaso inokubonakala kwixesha elifutshane kufutshane ne- $ 1,690 yenqanaba lamaxabiso, kwaye ngaphezulu ngezantsi kuphumla inqanaba le- $ 1,663. Kwikota yokuqala yalo nyaka, i-GDP yase-US esandula ukukhutshwa yangena nge-4.8 yepesenti imbi kakhulu kunokuba bekulindelwe.
tags Uhlalutyo Technical, XAUUSD
IFransi 40 (i-FR40 EUR) yokuQhekeka kweNqanaba lama-4500, iinzame zokuxhasa i-Uptrend
Iindawo eziNkxaso eziPhambili: 5400, 5300, 5200
IFransi 40 (i-FR40EUR) yexesha elide iTrend: Bullish
Ukuxhathisa okwangoku kwinqanaba le-4500 sele liza kwaphulwa. Ukusukela nge-25 ka-Matshi, iinkunzi zeenkomo zenze iinzame ezininzi zokwaphula ukungavumi kodwa zangaphumelela. IFransi 40 inokuthi inyuke iye kwinqanaba lama-4800 ukuba iinkunzi zeenkomo zigcina amandla akhoyo ngoku. Isalathiso sinokuwela ukuba iinkunzi zeenkomo ziyasilela ukugcina inkxaso engaphezulu kwe-4500.
I-FR40EUR-Itshathi yemihla ngemihla
Ngokunikezelwa kokunyuka kwangoko, isalathiso sikhuphukile saya kwinqanaba lama-53 leSalathiso seMandla esiNxulumene nesiQinisekiso seXesha le-14 Likummandla wonyuso kwaye ngaphezulu komgangatho ophakathi 50. I-SMA yeentsuku ezingama-21 ibonelela ngenkxaso yesalathiso.
IFransi 40 (FR40EUR) yeXesha eliPhakathi leNdlela: Bullish
Kwitshathi yeeyure ezi-4, isalathiso sikukunyuka okuphezulu. I-uptrend yangoku yapheliswa kwangoko kwi-4500 yokumelana. Kubonakala ngathi iinkunzi zizama ukwaphula ukuxhathisa okungama-4500. Kwicala elingasentla, ukuba amaxabiso ayenyuka kwinqanaba lexabiso langoku, imakethi iya kuba ngaphandle kwendawo yokumelana.
Isalathiso okwangoku singaphezulu kwe-80% yoluhlu lwemihla ngemihla. Oku kuthetha ukuba imarike ifikelele kwingingqi ethengiweyo. Nangona kunjalo, ii-stochastic bands zenza u-U-ujike ziye phezulu zibonisa ukuba amaxabiso akomeleleyo wokuqhubela phambili.
I-FR40EUR ikwisantya esomeleleyo sokukhuthaza. Ixabiso liyakhula ngelixa likummandla ogqithisileyo. Ummandla othengiweyo ongaphezulu awunakubanjwa ukuba imeko iyaqhubeka.
tags EFR40EUR, Uhlalutyo lwamaxabiso